Nepse Online कारोबारको पहिलो दिन नै सिंगटी हाइड्रोको शेयरमूल्य ७.८४ प्रतिशत बढ्यो,कतिमा भयो कारोबार ? – nepseonline
Thursday 05-26, 2022, 10:48 pm
कारोबारको पहिलो दिन नै सिंगटी हाइड्रोको शेयरमूल्य ७.८४ प्रतिशत बढ्यो,कतिमा भयो कारोबार ?
काठमाडौं । बुधवारदेखि कारोबार सुरु भएको सिंगटी हाइड्रो इनर्जी लिमिटेडको शेयर मूल्य पहिलो दिनमै ७ दशमलव ८४ प्रतिशत बढेको छ । पहिलो दिन प्रतिकित्ता २४ रुपैयाले बढेर कम्पनीको अन्तिम मूल्य ३३० रुपैया कायम भएको छ ।
कम्पनीको एसएचइएल स्टक संकेत बाट दोस्रो बजारमा कारोबार सुरु भएको हो । प्रतिकित्ता ३०६ रुपैया देखि कम्पनीको शेयर कारोबार खुला भएको हो । कम्पनीले बुधवार कुल १ करोड ४५ लाख कित्ता शेयर सूचीकृत गराएको थियो ।
प्रि ओपनिङ सेसनमा प्रतिकित्ता ३०६ रुपैयामा कारोबार म्याच भएकाले नियमति शेसनमा नेप्सेले तोकेको अधिकतम मूल्यभन्दा बढीमै कम्पनीको शेयर कारोबार खुला भएको हो । पहिलो कारोबार दिन कम्पनीको २ लाख ९ हजार ७०० रुपैयाबराबरको ६४० कित्ता शेयर कारोबार भएको छ । यो कारोबार ६४ पटकको व्यापारमा भएको हो ।